Kalsoonida Shacbiga ay ku qabaan M/weynaha, R/wasaaraha oo hoos u dhacday… – Hagaag.com
Kalsoonida Shacbiga ay ku qabaan M/weynaha, R/wasaaraha oo hoos u dhacday…
Daraasad ay si wada jir ah u diyaariyeen hay’adaha Ipsos Limited iyo Farsight Africa Research ayaa lagu sheegay in uu jiro hoos u dhac weyn oo ku yimid kalsoonida Shacabka ay ku qabeen madaxada Qaranka marka la bar bar dhiggo sanadkii 2017da.,
Aragtiyo kala duwan oo laga soo ururiyay dadka ku dhaqan gobollada ayaa isku khilaafsan jihada uu ku socdo dalka, Tusaale ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir oo ku yaal magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaasi oo 34% muwaadiniinta ku nool ay rumeysan yihiin in waddanka uu ku socdo jiha khaldan.
Arag-tidooda ayeey ku saleynayaan dadka fikiradahan la weydiiyay amni darrada, musuq-maasuqa, si xun u isticmaalka dhaqaalaha iyo weliba gaabiska ku yimid kobaca dhaqaalaha dalka.
Dhinaca kale marka la eego heerka kalsoonida ay ku qabeen shacabka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa hoos u dhacday marka loo eego sanadkii 2017da oo ah waqtigii loo doortay xilka madaxweynaha.
kalsoonidii madaxweynaha ay ku qabeen shacabkiisa, iyadoo sanadkii 2017-kii, heerka kalsoonida madaxweynaha ay mareysay 86%, balse haatan ay tahay 67%, tani oo weli ah tiro aad u sarreysa marka la barbardhigo inta badan madaxda dunida.
Kalsoonida Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa laftirkiisa la leeyahay siweyn ayey hoos ugu dhacday 62% halka sanadkii 2017 ay aheyd 83%.
Kalsoonida ay dadweynahu ku qabaan ciidanka booliska iyo kuwa milatariga ayaa si siman hoos ugu dhacday, ilaa ay gaartay heer ay shacabku aaminaan in ay ku guuldareysteen waajibaadkooda ah sugidda amniga dalka.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya 55%.
Daraasadan ayaa imanaysa xili dalka uu ku jiro jahwareer siyaasadeed, gaar ahaan marka la eego khilaafka dowlada dhexe iyo dowlad gobolleedyada iyo waliba doorashooyin xasaasi ah oo ku soo fool leh qaar ka mid ah maamul gobolleedyada dalka ka jira, oo madaxweynayaasha hadda tallada haya doonayaa in ay kursiga baaqi ku sii ahaadaan.